मोफसलमा नाटकको क्रेज हामीले बढाएका छौँ : कट्वाल दीपक (अन्तरवार्ता)
कोशी अनलाइन मङ्गलबार, २१ फागुन, २०७५ मा प्रकाशित
विराटनगर, फागुन २१
२०७० सालमा नैना उपन्यासमार्फत् नेपालकै कम उमेरको लेखकको रूपमा आफूलाई चिनाउन सफल कट्वाल दीपकले आफुलाई पूर्वका चर्चित नाट्यकर्मी तथा साहित्यकारका रुपमा चिनाएका छन् ।
‘च्यातिएको मोजा’ कथा संग्रह प्रकाशनको तयारीमा रहेका उनले ‘छिँडीभरिको आकाश’ र ‘मुनामदन’ नाटकको नाट्य लेखनसमेत गरेका हुन् । उनका दुवै नाटक पूर्वमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक हिट नाटकमा पर्छन् ।
विराटनगरस्थित महेन्द्र मोरङ कलेजमा पत्रकारिता पढ्दै गरेका उनी विराट आदर्श साहित्यिक मञ्चका सफल अध्यक्षसमेत हुन् । नाटक र साहित्यको माध्यमबाट पूर्वमै ख्याती कमाएका उनै कट्वाल दीपकसँग कोशी अनलाइनले गरेको छोटो कुराकारी यहाँहरूमाझ प्रस्तुत छ…
भर्खरै नाटक ‘मुनामदन’बाट सफलता पाउनु भएको छ, अहिले के मा ब्यस्त हुनुहुन्छ ?
लेखन यात्रामै ब्यस्त भएको छु । केही पाठक र अग्रजहरूले अर्को पुस्तक पढ्ने चाहना गरिरहनु भएको छ । दोस्रो कृति ‘च्यातिएको मोजा’ लेखनका साथै पढाइतिर ब्यस्त भएको छु ।
विराटनगरमा अगाडि मञ्चन गरिएका नाटकहरूमा दर्शकको उपस्थिति न्यून हुने गरेको थियो । ‘छिँडीभरिको आकाश’ र ‘मुनामदन’ २–२ पटक मञ्चन गरिसक्नु भएको छ, के विराटनगरमा नाटकको क्रेज बढेकै हो त ?
काम राम्रो गर्नुपर्छ सफलता आफैँ आउँछ भन्ने उदाहरण हो, हामीले गरेका कामहरू । दर्शकको क्रेज बढेको हो भन्दा पनि हामीले मोफसलमा दर्शकको क्रेज बढाएका हौँ भन्दा उत्तम होला । अरूले पनि नाटक गरेका छन् तर हामीले गरेका नाटकहरू दर्शकले रुचाउनु राम्रो काम गरेको उदाहरण हैन र ?
तपाईंले भन्न खोज्नु भएको तपाईंका नाटकहरू चर्चित हुन्छन् ?
मैले त्यस्तो भन्न खोजेको हैन । नाटक अरूका पनि चर्चित हुन्छन् तर हामीले अरूभन्दा फरक धारका नाटक रोजेका छौँ, जस्ले समाजलाई र आम दर्शकलाई केही कुरा सिकाओस् । हामीले अरूभन्दा राम्रो काम गरेका छौँ त्यहीँ भएर दर्शकको अपार माया पाएका छौँ ।
विराट आदर्श साहित्य मञ्चको अध्यक्ष पदमा हुनुहुन्छ, मञ्चलाई आगामी दिनमा कसरी अगाडि लैजानुहुन्छ ?
विराट आदर्श साहित्यिक मञ्च नितान्त कला, साहित्य र रङ्गमन्चप्रेमी युवाहरूको संस्था हो । हामीले मञ्चलाई पूर्वमा मात्र नभएर देशकै चर्चित संस्थाका रूपमा परिचित बनाउने योजनामा छौँ । चाँडै नै ‘मुनामदन’ नाटकलाई पोखरा, चितवन र धरानमा मञ्चकै आयोजनामा मञ्चन गर्दैछौ ।
मञ्चमा युवाहरूको आगमन पनि उत्तिकै बढिरहेको छ । आगामी कार्यक्रमका रुपमा मञ्चले ‘मञ्च एक प्रतिभा अनेक’, ‘स्रस्टा र सिर्जना’ अन्तरविद्यालय नाटक प्रतियोगिता जस्ता कार्यक्रमको आयोजना गर्ने योजनामा छौँ ।
साहित्य के हो जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
सबैका आ–आफ्नै परिभाषा छन् । मलाईं चाँही जीवन भोगाइको एउटा अनुभूति हो जस्तो लाग्छ । साहित्य जसले समाजमा घटेका घटना र भोगाइको मार्ग दर्शन गर्दछ ।
छोटो उमेरमै सफलता पाउनु भयो । पढाइसँगै साहित्य र रङ्गमञ्चलाई रोज्नु भएको छ, कत्तिको समस्या आइपरेका छन ?
यसलाइ सफलता भन्न मिल्दैन । दर्शक र आदरणीय ब्यक्तिहरूको माया हो भन्दा अझ ठीक होला । अवश्य समस्या आउँछ, जुन काममा समस्या छ त्यो काम दीपकले गर्छ । पढाइसँगै रङ्गमञ्चमा सक्रिय छु । हाम्रो समाजले अझै रङ्गमञ्च बुझेको छैन र यो क्षेत्रनै समस्याको क्षेत्र हो । यसैबाट सहजरुपमा बाँच्छु भन्ने वातावरण बनिसकेको छैन अझै ।
साहित्य र रङ्गमञ्च मै जीवन बिताउनु हुन्छ त ?
अहिले यसै गर्छु भन्न सकिन्न । समयले हेरौँ कतातिर लैजान्छ । तर, कट्वाल दीपक र साहित्य एक अर्काका परिपूरक हुन् । यसलाई छोड्न पनि सक्दिँन । हुनसक्छ पेशा अर्को होला तर साहित्य र रङ्गगमञ्चमा काम चै जिन्दगीभर गरिरहन्छु ।
तपाईंको अर्को नाटक कहिले हेर्न पाउँछन् त दर्शकले ?
मैले गरेका नाटकहरूले दर्शकलाई केही सिकाओस् भन्ने चाहना हो मेरो । भन्न खोजेको केही सन्देश देओस् । कट्वाल दीपकले गरेका नाटकहरूले एउटा बेग्लै छाप छोडेका छन् र चर्चित पनि भएका छन, जुन अर्को नाटकले पनि कायम गरोस् भन्ने चाहाना हो । अहिले नै भनेर भन्न नसके पनि फेरि एउटा उत्कृष्ट नाटक लिएर दर्शकको माँझमा आउँछु ।
अन्त्यमा के भन्न चाहानुहुन्छ, तपाईंका शुभचिन्तकहरूलाई ?
‘मुनामदन’लाई एउटा सफलताको उचाइमा प¥याइदिनु भएकोमा सम्पूर्णलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु । तपाईं हामी सबै मिलेर साहित्य र रङ्गमन्चको विकासमा जुटौ, कलाको सम्मान गरौँ र फेरि अर्को नाटकमा तपाईंहरूको साथ सहयोगको खाँचो छ उस्तै रूपमा सहयोग पाउँछु भन्ने आशा गरेको छु ।